NISA (@HSNQ_NISA) on Twitter
Official Twitter account of National Intelligence & Security Agency (NISA) of Somalia.
Sababo caafimaad awgeed, ayaa awoodii horjoogaha Maafiyada AS si KMG ah loogu wareejiyey abukar Aden, oo ah ku xigeenkiisa, waxaana loolan culus ka dhaxeeyaa garabka Mahad Karateey & garabka Diiriye oo ku hardamaya sidii loo magacaabi lahaa horjooge cusub.
Waxaan tahniyad iyo farxad ku aadan Ciidul-Fidriga la wadaagaynaa Ciidamada qalabka sida, qoysaskooda iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, hambalyo. Nabad iyo Nolol ku ciida. pic.twitter.com/JNvGZ5hoQw
NISA waxay u gudbisay Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, gungaarka baarista Gal dacwadeedka Haruun Macruuf, si uu uga guto talaabooyinka sharciga ah ee ku habboon.#NISA
Waxaan hambalyo diirran u diraynaa CXDS sanadguurada 60 aad ee aasaaskooda. Waa astaan qaran oo udub dhexaad u ah jiritaanka dadka & ilaalinta madaxbanaanida dalka. Waa Naftood hurayaal guulo soo hooyey, soona celiyey haybadii iyo magacii CXDS, Argagixisadana dhabarka ka jabshay. pic.twitter.com/Atvd40U5HP
Replying to @HSNQ_NISA
Waa qayb ka mid ah agabka qaraxyada laga sameeyo..(2) pic.twitter.com/kIlnvmhzSl
Howlgalo qorsheysan oo uu ciidanka Amnigu ka fuliyey Muqdisho 26 ilaa 28 bishaan, ayaa lagu soo qabtey Shabakad qaraxyada u qaabilsan AS, iyo maadooyinka qaraxyada laga sameeyo. Wada shaqaynta shacbka iyo laamaha Amniga waa sababta keentay guushaan...1 pic.twitter.com/u0tnORWWN6
Ciidamada Amniga, ayaa caawa gacanta kusoo dhigay dhagarqabe katirsan AS, isagoo doonayey inuu Bam-gacmeed tuuro, waxaana la qabtay isagoon wax qasaara ah u gaysan shacabka. Waxaana la xisaabtamaya hay’adaha ku shaqada leh. pic.twitter.com/TMDTl0ji74
Laamaha Amaanka ayaa maanta gacanta ku soo dhigay dhagarqabe Xudeyfa, katirsan qaybta qaraxyada AS, kaasoo ku xiray qarax dhejis ah gaari yaalay agagaarka isgoyska Zoobe pic.twitter.com/nEA93zJXhi
Hay’adaha Amniga ayaa shalay iyo maanta ku guulaysteen iney gacanta kusoo dhigaan sadex dhagarqabe oo ka tirsan AS, kana mid ah shabakadaha dilalka ka fuliya Muqdisho, wada shaqaynta shacabka iyo laamaha amniga ayaa sabab u ah guushaas. pic.twitter.com/A45tWjYfyb
Waxaa booqasho shaqo oo laba maalin ah ku yimid Muqdisho Agaasimaha Sirdoonka Naajeeriya(NIA) Axmed Abubakar Rufaaci, isagoo kulan laqaatay dhigiisa Soomaaliya Fahad Yasin, waxayna kala saxiixdeen isfaham iyo wada shaqayn buuxda oo dhexmarta labada Hay’adood ee labada dal.
Taliyaha Siradoonka wadanka Angola Gen. José Luís Caetano Higino de Sousa, oo booqasho rasmi ah kuyimid magaalada Muqdisho ayaa lakulmay Agaasimaha NISA Fahad Yasin, waxayna ka wadahadleen sidii ay uga faa’ideysan lahaayeen khibradda NISA ay u leedahay ladagaalanka argagaxisada.